बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य – Kavrepati
Home / समाचार / बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य
admin September 27, 2021	समाचार Leaveacomment 121 Views
काठमाडौ । बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) को उत्पादन भारतामा धेरै छ । तपाईले धेरै दिन अघि देखि सुन्नुभएको होला रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) को नयाँ रुप आउँदैछ ।
हो रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) ले अन्ततः रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) मेटेर ३५० सीसी आउने भएको छ । कम्पनीले मुल्य नै सार्वजनिक गरेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) मेटेर ३५० सीस भारतमा १ लाख २५ हजार ८ सय २५ रुपैयाँमा आउनेछ । नेपालमा दुई सय प्रतिशत कर भएकाले यसको मुल्य ३ लाख ७५ हजारसम्ममा नै आउनेछ ।
यो रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) को अहिलेसम्मकै सस्तो मुल्य हो । अहिलेसम्मकै सस्तोमा अहिलेसम्मकै राम्रो बाईक आएको हो । यसमा फायरबल, स्टेलर र सुपरनोभा जस्ता तीन भेरियन्टहरूमा सुरू भएको छ ।
सुरुमा यो बाईक पहेलो, रातो र अन्य एक रंगहरूमा निस्किएको छ । यो बाइकले होन्डाको H’Ness CB350 र जावा ट्वीन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
अन्य समाचार : एम्बाप्पे र नेयमार बीच लफडा ? बाहिरियो यस्तो भिडियो ! [भिडियो सहित] एजेन्सी – फ्रेन्च लिग वानमा पेरिस सेन्ट जर्मेन(पिएसजी)ले अपराजित यात्रालाई जारी राखेको छ। शनिबार राति घरेलु मैदानमा मोन्टपेलिएरमाथि २–० को सहज जित निकाल्दै अपराजित यात्रालाई पिएसजी निरन्तरता दिएको हो।
Previous महिलाहरु पहिलोपटक यौ’न सम्पर्क गर्दा किन डराउँछन, ३२ बर्षिया नेपाली युवतीको यस्तो छ अनुभव !
Next यी ५ युवती मध्ये कुन मनपर्यो ? एक छान्नुहोस र थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व ।